Monday July 22, 2019 - 12:20:15 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Camaliyad istish-haadi ah oo loo adeegsaday gaari miineysan ayaa barqanimadii maanta lagu beegsaday koontaroolka laga ilaaliyo gegida diyuuradaha ee Muqdisho kaas oo ay maamulaan ciidamada amniga ee DFS.
Warar hordhac ah oo aan heleyno ayaa sheegaya in qaraxa uu gabi ahaanba burburiyay koontaroolka islamarkaana ay halkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar fara badan oo u badnaa ilaaladii koontaroolka.
Ilo wareedyo ayaa sidoo kale SomaliMeMo u xaqiijiyay in xilliga uu qaraxu dhacayay koontaroolka lagu hubinayey gawaari kuwa aan xabada karin ah oo ay wateen mas'uuliyiin iyo saraakiil sare sare islamarkaana ay waxyeello xooggan soo gaartay qaar ka mid ah gawaaridaas iyo ciidamadii ilaalinayey oo saarnaa gaadiid dusha ka feydan.
Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyada weerarkan iyadoo sheegtay in uu bartilmaameedku ahaa koontaroolkaas oo ay sheegtay in uu ahaa mid ay dagan yihiin maleeshiyaat Ashahaada la dirir ah lagana ilaaliyo xarumaha hay'adaha shisheeye ee ku yaalla aagga garoonka.
illaa hadda lama hayo tiro rasmi ah oo ku aadan khasaaraha uu geystay qaraxan balse goobjoogeyaal ayaa tilmaamaya inuu qaraxu galaaftay nolosha dad u badan ilaalada koontaroolka.
Qaraxan ayaa kusoo aadaya xilli waddooyinka muhiimka ah ee soo gala magaalada Muqdisho ay xireen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM waxaana muuqata in xukuumadda Xasan Cali Kheyre ay ku guul darraysatay sugidda ammaanka caasimadda.